I-villa yokuphumla - I-Airbnb
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguNicoletta
Indlu entle ejonge emazantsi ntshona kwilali enedama lokuqubha. Ngaphakathi kwi-complex ye-Altanea di Caorle, i-400 yeemitha ukusuka elwandle kunye ne-100 yeemitha ukusuka kwi-arcade yokuthenga kunye nemivalo. Kufuphi (1km) kukho ivenkile enkulu enestokhwe evulwa unyaka wonke. Indawo efanelekileyo yokuhamba ixesha elide okanye ukukhwela ibhayisekile ngenxa yeendawo ezinkulu, ezigcinwe kakuhle kunye nepanoramic eluhlaza. Kufuphi neCaorle (5km), kufutshane nendawo yokuphuma yaseMcArthur Glenn eNoventa di Piave (imizuzu engama-20). Kwimizuzu engama-40 ufika eVenice.
Le ndlu ikwimigangatho emibini, inegadi yabucala ebiyelweyo, ilungele abo banabantwana okanye izilwanyana zasekhaya. Kwi-patio kukho kwakhona indawo yomlilo ene-barbecue. Kumgangatho ophantsi kukho igumbi lokuhlala elikhulu elinekhitshi kunye nebhedi ekhululekileyo yesofa.Kumgangatho wokuqala igumbi lokuhlambela, elinefestile kunye neshawari yokuhamba, kunye negumbi lokulala elineebhedi ezimbini kunye nebhedi enye kunye neengcango zaseFransi kwithafa elibanzi.
4.95 · Izimvo eziyi-38
I-Lido Altanea iphawulwe ngeendawo ezinkulu eziluhlaza ezigcinwe kakuhle, zonke iindlela zangaphakathi zihamba ngebhayisekile kwaye zanda kangangeekhilomitha ezininzi elunxwemeni, echibini, kwintenetya kunye namabala ebhola ekhatywayo. Elunxwemeni kukho iindawo zaselwandle zasimahla apho unokuzisa khona izinja zakho kwaye ngokubanzi kuyenzeka ukuba usebenzise isitulo sakho sedekhi njengenye indawo elunxwemeni oluxhotyiswe ngomrhumo. Ndikhetha ukuya kwijethi enamatye apho amatye abanzi nagudileyo akuvumela ukuba ugcakamele ilanga uzuza kwimpepho yolwandle kunye nokuzola okukhulu ngakumbi.
Umbuki zindwendwe ngu- Nicoletta
Ndifumaneka nanini na ngeSMS okanye wapp ngayo nantoni na.